Top Upcoming Smartphones of December 2019 | Net Guide
Home Article Top Upcoming Smartphones of December 2019
ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ဖဖေျောဝါရီလကနစေလို့ အောကျတိုဘာလအတှငျးမှာ စိတျဝငျစားစရာကောငျးပွီး သုံးစှဲသူစိတျကွိုကျ အဆငျပွစေမေယျ့ စမတျဖုနျးပေါငျးမြားစှာကို တှမွေ့ငျခဲ့ရပွီးပါပွီ။ လူတိုငျးကိုစိတျဝငျစားစတေဲ့လတှကေတော့ ဖဖေျောဝါရီနဲ့စကျတငျဘာတှပေဲဖွဈပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျအဲ့ဒီလတှမှော ပွုလုပျတဲ့နညျးပညာပွပှဲတှဟော အခွားလတှမေတူကှဲပွားမှုတှရှေိနခေဲ့ပါတယျ။ ဥပမာအနနေဲ့ပွောရမယျဆိုရငျ apple september event လိုမြိုးတှပေေါ့။ အခုဒီဇငျဘာလမှာလညျး အဲ့လိုစိတျဝငျစားစရာကောငျးလှတဲ့ စမတျဖုနျးမိတျဆကျပှဲတှရှေိနပေါတယျ။ အသှငျမတူ၊ မတူကှဲပွားမှုတှဟောအေးမွတဲ့ဒီဇငျဘာနဲ့အတူ သငျ့ကိုအေးစိမျ့စိမျ့အတှအေ့ကွုံတှပေေးအုံးမှာပါ။ ဒါကွောငျ့ 2019 ဒီဇငျဘာမှာ မိတျဆကျမယျ့အဆငျ့မွငျ့စမတျဖုနျးတှကေို စုဆောငျးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ ဒီလထဲမှာထှကျလာမယျ့ ဖုနျးတှဖွေဈတဲ့ Reno3series, Vivo X30 series, Redmi K30 lineup နဲ့ Realme X50 ဖုနျးတှအေားလုံးဟာ ဈေးသကျသာတဲ 5G mid-range chipsetsကိုသုံးလာမယျ့ ဖုနျးတှပေါဘဲ။ တနညျးအားဖွငျ့ဒီလမှာ မိတျဆကျမယျ့ ဖုနျးအမြားစုဟာ တရုတျထိပျတနျးစမတျဖုနျးထုတျလုပျသူတှရေဲ့ ဖုနျးတှမြေားပါတယျ . . .
တရုတျစမတျဖုနျးထုတျလုပျသူတဈဦးဖွဈတဲ့ Oppo ကုမ်ပဏီရဲ့ sub-brand ဖုနျးမျောဒယျလို့ဆိုရမယျ့ Realme ဟာ ကုမ်ပဏီရဲ့ပထမဆုံး 5G ဖုနျးကို အခုဒီဇငျဘာမှာမိတျဆကျမယျလို့သိရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ကုမ်ပဏီဟာ ဘယျနမေိ့တျဆကျမယျဆိုတာနဲ့ ရကျစှဲကိုတိတိကကြထြုတျပွနျပေးခွငျးမရှိသေးပါဘူး။ ဖုနျးတှရေဲ့ မျောဒယျနာမညျတှကေတော့ Realme X50 နဲ့ X50 Youth Edition တို့ဖွဈမယျလို့သိရပါတယျ။ ဒီဖုနျးတှမှော 5G ကှနျရကျခြိတျဆကျမှုရရှိမှာဖွဈပွီး Snapdragon 765 (သို့) 765G chipset တှကေိုသုံးလာမယျလို့ သတငျးထှကျနပေါတယျ။ Realme X50 5G ဖုနျးမှာ S-AMOLED display သုံးလာမှာဖွဈပွီး 6.44 inches နဲ့ 90Hz refresh rate ထောကျပံ့မယျလို့ဆိုပါတယျ။ တရားဝငျသတငျးတှအေရ Snapdragon 735 5G chipset ကို ဒီဖုနျးမှာသုံးမှာဖွဈပွီး နောကျကြောဘကျမှာ ကငျမရာ4လုံးတပျဆငျလာမှာပါ။ Sony IMX686 60-megapixel အဓိကဖွဈပွီး 8-megapixel ultrawide lens, 2-megapixel macro lens နဲ့ 2-megapixel portrait lens တှကေို ဒီဖုနျးမှာ သုံးမယျလို့သိရပါတယျ။ selfies အတှကျကလညျး ကငျမရာ2လုံးပါ။ 32-megapixel + 8-megapixel wide-angle lens ပေါငျးစပျမှု ဖွဈမှာပါ။ ဘကျထရီစှမျးအားပိုငျးအတှကျ 4,500mAh ကို Super VOOC 4.0 Flash Charge technology ထောကျပံ့မှာပါ။ ဒီဖုနျးဟာ ပထမဆုံး wireless charging support လုပျမယျ့ဖုနျးလို့လညျး သိရပါတယျ။ Realme X50 Lite (Youth Edition) ကိုလညျး 5G အနနေဲ့ ထုတျလာပေးမှာပါ။ ဒီဖုနျးမှာ 6.55-inch IPS LCD display ဖွဈပွီး ပုံမှနျ 60Hz refresh rate နဲ့ဖွဈမှာပါ။ ပရိုဆကျဆာအတှကျတော့ MediaTek MT6885 5G စှမျးအားကို သုံးပေးပါလိမျ့မယျ။ ကငျမရာ4လုံးဖွဈပွီး 16-megapixel / 8-megapixel wide-angle lens / 2-megapixel macro lens နဲ့ 2-megapixel portrait lens တို့ကို သုံးရမှာပါ။ အရှဘေ့ကျကငျမရာ 1 လုံးသာထညျ့ထားပွီး 32-megapixel ဖွဈမယျလို့ သတငျးထှကျထားပါတယျ။ ဘကျထရီကတော့ ကွီးမားတဲ့ 5,000mAh စှမျးအားကို သုံးထားပါတယျ။
Oppo Reno3line-up ဖုနျးတှကေိုလညျး ဒီလထဲမှာပဲမိတျဆကျပေးတော့မှာဖွဈပါတယျ။ Reno3နဲ့ Reno3Pro ဆိုတဲ့ ဖုနျး2မြိုးဖွဈပါတယျ။5ဂြီကှနျရကျခြိတျဆကျမှုရရှိနိုငျမယျ့ Snapdragon 765 (သို့) 765G processor သုံးလာမှာ ဖွဈပါတယျ။ ကုမ်ပဏီရဲ့အတညျပွုခကျြအရ 4025 mAh ဘကျထရီနဲ့အတူ 7.7 mm အထူသာရှိမှာ ဖွဈပါတယျ။ နောကျထပျပွောငျးလဲမှုကတော့ ငါးမနျးပုံစံ (shark fin pop-up ) ကငျမရာနရောမှာ punch-hole display ကငျမရာနဲ့အစားထိုးလာမှာ ဖွဈပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ရကျအနညျးငယျကတော့ Oppo Reno3နဲ့ပတျသတျတဲ့အခကျြ အလကျတှေ TENAA မှာ ထှကျရှိထားပါတယျ။ ကငျမရာကိုလညျး4လုံးဖွဈပွီး 60 MP အဓိကသုံးမယျလို့ဆိုပါတယျ။ ပွီးတော့ အဲ့ဒီစမတျဖုနျးဟာကုမ်ပဏီကနေ ထုတျထားတဲ့နောကျဆုံးပျေါ ColorOS7ကို တပါတညျး ထညျ့သှငျး လာမယျ့ဖုနျးဖွဈပါတယျ။ OPPO ရဲ့ဒုဥက်ကဌဖွဈတဲ့ ShenYiren ကလညျး လူမှုကှနျရကျဝီဘိုမှာ ဖုနျးနဲ့ပတျသတျတဲ့ အခကျြအလကျတှကေို ဝမြှေပေးထားပါတယျ။ အဲ့ဒီအခကျြအလကျတှအေရ Oppo Reno3ဖုနျးမှာ 4,025mAh ဘကျထရီပါဝငျလာမှာကတော့ သခြောလကျြရှိနပေါတယျ။ နောကျထပျကတော့ dual-mode 5G smartphone ဖွဈလာမယျ့ Snapdragon 735 5G chipset ကိုသုံးလာမှာပါ။ 8GB RAM နဲ့အတူ 256GB သိုလှောငျနိုငျမယျ့ ဗားရှငျးအထိထှကျနိုငျပါ တယျ။ နောကျထပျမြှျောလငျ့လို့ရတာကတော့ Reno 3စမတျဖုနျးနဲ့အတူ Reno3Pro စမတျဖုနျးကိုလညျး ဒီလနှောငျးပိုငျးမှာ ထုတျပွမှာဖွဈပါတယျ။ တရုတျနိုငျငံမှာတော့ 5G စမတျဖုနျးတှအေသုံးပွုလို့ရနပေါပွီ။ ဒါကွောငျ့ 5G ဖုနျးဈေးကှကျ ပိုမိုဖွဈထှနျးလာနတောပါ။
ကိုရီးယားစမတျဖုနျးထုတျလုပျသူဖွဈတဲ့ Samsung ကတော့ လာမယျ့ 12 ရကျနမှေ့ာ Galaxy A 2020 line-up တှကေို မိတျဆကျလာမယျ့ဆိုတဲ့ အစီအစဉျကိုပယျဖကျြလိုကျပွီဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအစား 12 ရကျနမှေ့ာ Galaxy A51 နဲ့ A71 ဖုနျးတှကေိုသာ မိတျဆကျပေးတော့မယျလို့ သိရပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ရကျအနညျးငယျက Samsung အနနေဲ့ Galaxy A 2020 seriesသဈတှဖွေဈတဲ့ Galaxy A11, A31 နဲ့ A41 ဖုနျးတှကေို ထုတျလုပျနတေယျဆိုတဲ့ သတငျးတှသေိရှိရပါတယျ။ Galaxy A 2020 series အသဈတှမှောတော့ Samsung flagships ဖုနျးဖွဈတဲ့ Galaxy Note 10 series ဖုနျးတှမှောပါဝငျ တဲ့ အခကျြအလကျအနညျးငယျ ထညျ့သှငျးပေးထားမယျလို့ သိရပါတယျ။ Galaxy A51 နဲ့ A71ဖုနျးတှရေဲ့ နောကျကြော ဘကျမှာ L-shaped camera module နဲ့အတူ ဆငျဆာ4ခုပါဝငျလာမှာ ဖွဈပါတယျ။
နောကျထပျတရုတျစမတျဖုနျးထုတျလုပျသူဖွဈတဲ့ Vivo ကတော့ upper-midrange series လို့ဆိုရမယျ့ Vivo X30 ဖုနျးတှကေို လာမယျ့ 16 ရကျနေ့ တရုတျမှာ မိတျဆကျမယျလို့ကွညောထားပါတယျ။ Vivo X30 seriesတှမှောတော့ Vivo X30 နဲ့ X30 Pro ဆိုပွီး မျောဒယျ2မြိုးပါဝငျလာမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီဖုနျးတှမှော SA နဲ့ NSA 5G modes တှကေို ထောကျပံ့ မှာပါ။ နောကျထပျသတငျးအခကျြအလကျကတော့ Samsung Exynos 980 chipset ကို သုံးလာမယျဆိုတာပါ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ Samsung Exynos 980 chipset ဟာ 5G modem ပါဝငျနတောကွောငျ့ပါ။ အဲ့ဒီစမတျဖုနျး တှမှောလညျး quad camera setup နဲ့ဖွဈပွီး ကငျမရာတှဟောဖုနျးရဲ့ထောငျ့ဘကျမှာ ဒေါငျလိုကျပုံစံမြိုးတပျဆငျထားမှာပါ။ 60x super zoom နဲ့အတူ periscope lens တှပေါတပျဆငျထားပါတယျ။ ထောငျ့ဘကျမှာ punch-hole display ဖွဈပါ တယျ။ 33W fast charging ထောကျပံ့ပေးနိုငျမယျလို့မြှျောလငျ့ရပါတယျ။ နောကျဆုံးထှကျထားတဲ့ အခကျြအလကျတှအေရ Vivo X30 features ပိုငျးအနနေဲ့ 6.44-inch display ဖွဈပွီး JoviOS ကို pre-loaded ထညျ့သှငျးထားမှာပါ။
Vivo X30 series စမတျဖုနျးတှကေို မိတျဆကျပွီးနောကျရကျမှာပဲ Realme အနနေဲ့သူတို့ရဲ့စမတျဖုနျးသဈတှဖွေဈတဲ့ Realme XT mid-ranger ဖုနျးကို အိန်ဒိယမှာဖွနျ့ခြိမှာဖွဈပါတယျ။ Realme XT 730G လို့နာမညျပေးထားပွီး Snapdragon 730G chipset နဲ့အတူ ပိုကောငျးတဲ့အရှဘေ့ကျကငျမရာကို ထညျ့ပေးထားမှာဖွဈပါတယျ။ ပွီးတော့ faster charging နညျးပညာလညျး သုံးနိုငျမှာပါ။ ဈေးကှကျပုံစံကိုအနညျးငယျ နားလညျလို့မရတာကအဲ့ဒီဖုနျးကို ကမ်ဘာ့စမတျဖုနျး ဈေးကှကျမှာ Realme X2 လို လူသိမြားပါတယျ။ Realme XT 730G နဲ့အတူ wireless earbuds ကိုပါ အိန်ဒျိဈေးကှကျအတှကျ ထုတျပေးမှာပါ။ လကျရှိမွနျမာနိုငျငံဈေးကှကျထဲမှာတော့ wireless earbuds ကိုရောငျးခနြပွေီဖွဈပါတယျ။ ကငျမရာ ပိုငျးအတှကျ ဒီဖုနျးမှာ Samsung GW1sensor ဖွဈတဲ့ 64MP ကို သုံးထားမှာဖွဈပွီး f/1.8 aperture နဲ့ဖွဈပါတယျ။ XT 730G ရဲ့ဘကျထရီဟာ 4000mAh စှမျးအားနဲ့ဖွဈပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ရကျက Vivo အနနေဲ့ iQOO Neo 855 Racing Edition ကို တရုတျနိုငျငံဈေးကှကျအတှကျ လာမယျ့ 12 ရကျနမှေ့ာ တရားဝငျရောငျးခပြေးသှားမယျလို့ ဆိုပါတယျ။ iQOO Neo 855 ဟာ စှမျးအားပွညျ့ပရိုဆကျဆာနဲ့ဖွဈပွီး Snapdragon 855+ ကိုသုံးထားတာပါ။ ပွီးတော့အားသှငျးမွနျတဲ့ စနဈကလညျး 33W fast charging ဖွဈပါတယျ။ memory2မြိုးရှေးခယျြနိုငျမှာဖွဈပွီး 8GB RAM မှာ 128 GBနဲ့ 12/128 GB version ဆိုပွီးတော့ ဖွဈပါတယျ။ Racing Edition features ပိုငျးအနနေဲ့ 6.38-inch S-AMOLED display ကိုသုံးထားပွီး waterdrop notch ဖွဈပါတယျ။ Android9Pie OS အခွပွေုFunTouch OS9ကို သုံးနိုငျမှာဖွဈပွီး Multi-Turbo acceleration နညျးပညာကွောငျ့ ဂိမျးမငျးစှမျးဆောငျ ရညျပိုငျးမှာ ပိုကောငျးတဲ့လုပျဆောငျနိုငျစှမျးကို ရရှိပါလိမျ့မယျ။ Game Box ၊ Game Space 2.5 အသုံးနဲ့ ဖွဈပါတယျ။ ဘကျထရီကတော့ 4,500mAh စှမျးအားနဲ့ဖွဈပွီး liquid cooling နဲ့အတူ 10-layer heat dissipation စနဈပါဝငျပါတယျ။
ဒီရကျပိုငျးမှာ Huawei အနနေဲ့ Nova6စီးရီးဖုနျးတှကေို မိတျဆကျပေးထားပါတယျ။ ဒီဇငျဘာအတှကျ သတငျးကောငျးလို့သတျမှတျရမှာပါ။ Nova 6, Nova65G နဲ့ Nova6SE တို့ပဲဖွဈပါတယျ။ Huawei Nova6နှငျ့ Nova65G နှဈမြိုးလုံးမှာမကျြနှာပွငျ 6.57 လကျမ FHD+ AMOLED ရုပျထှကျသုံးထားပွီး မကျြနှာပွငျဘယျဖကျမှာ Punch-Hole ပါဝငျပါတယျ။ ရှကေ့ငျမရာနှဈလုံးက 32MP+8MP ဖွဈပွီး ဒုတိယကငျမရာက 105 ဒီဂရီမွငျကှငျးကယျြ ရိုကျကူးနိုငျပါမယျ။ ဒါပမေယျ့ Nova6နှငျ့ Nova65G အကွား ကှဲပွားသှားတာကတော့ Nova65G မှာ Autofocus ပါဝငျတာ ဖွဈပါတယျ။ ကြောဘကျကငျမရာသုံးလုံးက 48MP+8MPTelep- hoto(OIS)+8MP Ultrawide ဖွဈပါတယျ။ Nova6မှာ အဓိကကငျမရာ 48MP မှာ Aperture f/1.8 သုံးထားကာ Nova65G မှာ Aperture f/1.7 သုံးထားပါတယျ။ Huawei Nova6နှငျ့ Nova65G တို့နှဈမြိုးလုံးကို Kirin 990 Chipset နှငျ့ပါဝါထောကျပံ့ထားပါတယျ။ ဖုနျးနှဈမြိုးစလုံးမှာ လကျဗှရောစနဈကိုဘောငျမှာ ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။Nova65G မှာတော့Balong 5000 5G Modem ပါဝငျပါတယျ။ ဖုနျးနှဈမြိုးလုံးမှာ RAM8GB ပါဝငျပါတယျ။ Huawei Nova6ကို 128GB ဗားရှငျးတဈမြိုးတညျးနှငျ့ဘဲ ရှေးခယျြနိုငျပမေယျ့ Nova65G ကိုတော့ Storage 128GB နှငျ့ 256GB တို့နှငျ့ရှေးခယျြနိုငျပါမယျ။ ဖုနျးနှဈမြိုးလုံးမှာ Android 10 အခွခေံ EMUI 10 အသုံးပွုထားပါတယျ။ Nova6မှာဘကျထရီ 4100 mAhပါဝငျပွီး 5G ဗားရှငျးမှာဘကျထရီ 4200 mAhပါဝငျပွီး40W Huawei SuperChargeဖွငျ့အားသှငျးနိုငျပါမယျ။Huawei Nova6SE ကတော့အလယျအလတျတနျးစမတျဖုနျးအမြိုးအစား ဖွဈပါတယျ။ဒီဖုနျးမှာမကျြနှာပွငျ 6.4 လကျမ FHD+ LCD သုံးထားပွီး Punch-Hole မှာ ရှကေ့ငျမရာ 16MP ကိုထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ အခွား Nova6ဖုနျးနှဈမြိုးလိုဘဲ လကျဗှရောစနဈကိုဘောငျမှာ ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ ကြောဘကျကငျမရာလေးလုံးပါဝငျကာ 48MP+8MP Ultrawide+2MP Macro+2MP Depth တို့ ဖွဈပါတယျ။ ဒီဖုနျးကို Kirin 810 Chipset ၊ RAM8GB နှငျ့အထိုငျခထြားပွီး Storage 128GB ပါဝငျပါတယျ။ ဘကျထရီ 4000 mAhပါဝငျပွီး 40W Huawei SuperCharge ဖွငျ့ဘဲ အားသှငျးနိုငျပါမယျ။ Samsung S 10 lite
Samsung က သူ့ရဲ့ပွငျသဈဝကျဘျဆိုကျမှာ Galaxy S10 Lite ရဲ့ Support Page ကို လှငျ့တငျလိုကျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ဒီလအတှငျး ကွညောသှားနိုငျပါတယျ။ SM=G770F/DS Model အတှကျ Page ကို ဖနျတီးလိုကျတာဖွဈပွီး အဲဒါဟာ Galaxy S10 Lite ဖွဈမယျလို့သိရပါတယျ။ အဲဒီ Model ကို FCC Page မှာလညျး တှခေဲ့ရပွီး 45W Fast Charging ထောကျပံ့တဲ့ 4,500mAh Battery ပါမယျလို့ သတငျးထှကျနပေါတယျ။ Galaxy S10 Lite မှာ 48MP Main , 12MP Ultrawide နဲ့ 5MP Depth Sensor တှပေါမယျလို့သတငျးထှကျနပေါတယျ။ အရှကေ့ငျမရာက 32MP ဖွဈပါတယျ။ Samsung က မကွာခငျမှာ Galaxy S10 Lite ကိုခပြွတော့မယျလို့ထငျရပါတယျ။ သူနဲ့အတူ Galaxy Note 10 Lite ပါထှကျလာနိုငျပါတယျ။ သူ့ရဲ့သတငျးအခကျြအလကျတှမေကွာခငျက Geekbench ကနေ ထှကျလာခဲ့ဖူးပါတယျ။ 45W Fast Charging ထညျ့သှငျးထားမှာဖွဈပါတယျ။ မကျြနှာပွငျအရှယျအစားက 6.7 လကျမဖွဈပွီး Full HD+ Resolution ဖွဈပါတယျ။ Galaxy A91 မှာလို Qualcomm Snapdragon 855 Chipset မောငျးနှငျထားမှာပါ။ 8GB RAM နဲ့ 128GB Storage တှေ ထညျ့သှငျးထားနိုငျပါတယျ။ Galaxy S10 Lite ရဲ့အစိတျအပိုငျးအမြားစုဟာ Galaxy S10 နဲ့တူမှာ ဖွဈပါတယျ။ NetGuide Journal (Every Wednesday)
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကနေစလို့ အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး သုံးစွဲသူစိတ်ကြိုက် အဆင်ပြေစေမယ့် စမတ်ဖုန်းပေါင်းများစွာကို တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးပါပြီ။ လူတိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားစေတဲ့လတွေကတော့ ဖေဖော်ဝါရီနဲ့စက်တင်ဘာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီလတွေမှာ ပြုလုပ်တဲ့နည်းပညာပြပွဲတွေဟာ အခြားလတွေမတူကွဲပြားမှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် apple september event လိုမျိုးတွေပေါ့။ အခုဒီဇင်ဘာလမှာလည်း အဲ့လိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှတဲ့ စမတ်ဖုန်းမိတ်ဆက်ပွဲတွေရှိနေပါတယ်။ အသွင်မတူ၊ မတူကွဲပြားမှုတွေဟာအေးမြတဲ့ဒီဇင်ဘာနဲ့အတူ သင့်ကိုအေးစိမ့်စိမ့်အတွေ့အကြုံတွေပေးအုံးမှာပါ။ ဒါကြောင့် 2019 ဒီဇင်ဘာမှာ မိတ်ဆက်မယ့်အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းတွေကို စုဆောင်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီလထဲမှာထွက်လာမယ့် ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Reno3series, Vivo X30 series, Redmi K30 lineup နဲ့ Realme X50 ဖုန်းတွေအားလုံးဟာ ဈေးသက်သာတဲ 5G mid-range chipsetsကိုသုံးလာမယ့် ဖုန်းတွေပါဘဲ။ တနည်းအားဖြင့်ဒီလမှာ မိတ်ဆက်မယ့် ဖုန်းအများစုဟာ တရုတ်ထိပ်တန်းစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့ ဖုန်းတွေများပါတယ် . . .
တရုတ်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Oppo ကုမ္ပဏီရဲ့ sub-brand ဖုန်းမော်ဒယ်လို့ဆိုရမယ့် Realme ဟာ ကုမ္ပဏီရဲ့ပထမဆုံး 5G ဖုန်းကို အခုဒီဇင်ဘာမှာမိတ်ဆက်မယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကုမ္ပဏီဟာ ဘယ်နေ့မိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာနဲ့ ရက်စွဲကိုတိတိကျကျထုတ်ပြန်ပေးခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ဖုန်းတွေရဲ့ မော်ဒယ်နာမည်တွေကတော့ Realme X50 နဲ့ X50 Youth Edition တို့ဖြစ်မယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီဖုန်းတွေမှာ 5G ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုရရှိမှာဖြစ်ပြီး Snapdragon 765 (သို့) 765G chipset တွေကိုသုံးလာမယ်လို့ သတင်းထွက်နေပါတယ်။ Realme X50 5G ဖုန်းမှာ S-AMOLED display သုံးလာမှာဖြစ်ပြီး 6.44 inches နဲ့ 90Hz refresh rate ထောက်ပံ့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တရားဝင်သတင်းတွေအရ Snapdragon 735 5G chipset ကို ဒီဖုန်းမှာသုံးမှာဖြစ်ပြီး နောက်ကျောဘက်မှာ ကင်မရာ4လုံးတပ်ဆင်လာမှာပါ။ Sony IMX686 60-megapixel အဓိကဖြစ်ပြီး 8-megapixel ultrawide lens, 2-megapixel macro lens နဲ့ 2-megapixel portrait lens တွေကို ဒီဖုန်းမှာ သုံးမယ်လို့သိရပါတယ်။ selfies အတွက်ကလည်း ကင်မရာ2လုံးပါ။ 32-megapixel + 8-megapixel wide-angle lens ပေါင်းစပ်မှု ဖြစ်မှာပါ။ ဘက်ထရီစွမ်းအားပိုင်းအတွက် 4,500mAh ကို Super VOOC 4.0 Flash Charge technology ထောက်ပံ့မှာပါ။ ဒီဖုန်းဟာ ပထမဆုံး wireless charging support လုပ်မယ့်ဖုန်းလို့လည်း သိရပါတယ်။ Realme X50 Lite (Youth Edition) ကိုလည်း 5G အနေနဲ့ ထုတ်လာပေးမှာပါ။ ဒီဖုန်းမှာ 6.55-inch IPS LCD display ဖြစ်ပြီး ပုံမှန် 60Hz refresh rate နဲ့ဖြစ်မှာပါ။ ပရိုဆက်ဆာအတွက်တော့ MediaTek MT6885 5G စွမ်းအားကို သုံးပေးပါလိမ့်မယ်။ ကင်မရာ4လုံးဖြစ်ပြီး 16-megapixel / 8-megapixel wide-angle lens / 2-megapixel macro lens နဲ့ 2-megapixel portrait lens တို့ကို သုံးရမှာပါ။ အရှေ့ဘက်ကင်မရာ 1 လုံးသာထည့်ထားပြီး 32-megapixel ဖြစ်မယ်လို့ သတင်းထွက်ထားပါတယ်။ ဘက်ထရီကတော့ ကြီးမားတဲ့ 5,000mAh စွမ်းအားကို သုံးထားပါတယ်။
Oppo Reno3line-up ဖုန်းတွေကိုလည်း ဒီလထဲမှာပဲမိတ်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Reno3နဲ့ Reno3Pro ဆိုတဲ့ ဖုန်း2မျိုးဖြစ်ပါတယ်။5ဂျီကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုရရှိနိုင်မယ့် Snapdragon 765 (သို့) 765G processor သုံးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီရဲ့အတည်ပြုချက်အရ 4025 mAh ဘက်ထရီနဲ့အတူ 7.7 mm အထူသာရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ပြောင်းလဲမှုကတော့ ငါးမန်းပုံစံ (shark fin pop-up ) ကင်မရာနေရာမှာ punch-hole display ကင်မရာနဲ့အစားထိုးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကတော့ Oppo Reno3နဲ့ပတ်သတ်တဲ့အချက် အလက်တွေ TENAA မှာ ထွက်ရှိထားပါတယ်။ ကင်မရာကိုလည်း4လုံးဖြစ်ပြီး 60 MP အဓိကသုံးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီစမတ်ဖုန်းဟာကုမ္ပဏီကနေ ထုတ်ထားတဲ့နောက်ဆုံးပေါ် ColorOS7ကို တပါတည်း ထည့်သွင်း လာမယ့်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်။ OPPO ရဲ့ဒုဥက္ကဌဖြစ်တဲ့ ShenYiren ကလည်း လူမှုကွန်ရက်ဝီဘိုမှာ ဖုန်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဝေမျှပေးထားပါတယ်။ အဲ့ဒီအချက်အလက်တွေအရ Oppo Reno3ဖုန်းမှာ 4,025mAh ဘက်ထရီပါဝင်လာမှာကတော့ သေချာလျက်ရှိနေပါတယ်။ နောက်ထပ်ကတော့ dual-mode 5G smartphone ဖြစ်လာမယ့် Snapdragon 735 5G chipset ကိုသုံးလာမှာပါ။ 8GB RAM နဲ့အတူ 256GB သိုလှောင်နိုင်မယ့် ဗားရှင်းအထိထွက်နိုင်ပါ တယ်။ နောက်ထပ်မျှော်လင့်လို့ရတာကတော့ Reno 3စမတ်ဖုန်းနဲ့အတူ Reno3Pro စမတ်ဖုန်းကိုလည်း ဒီလနှောင်းပိုင်းမှာ ထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ 5G စမတ်ဖုန်းတွေအသုံးပြုလို့ရနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် 5G ဖုန်းဈေးကွက် ပိုမိုဖြစ်ထွန်းလာနေတာပါ။
ကိုရီးယားစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်တဲ့ Samsung ကတော့ လာမယ့် 12 ရက်နေ့မှာ Galaxy A 2020 line-up တွေကို မိတ်ဆက်လာမယ့်ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအစား 12 ရက်နေ့မှာ Galaxy A51 နဲ့ A71 ဖုန်းတွေကိုသာ မိတ်ဆက်ပေးတော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က Samsung အနေနဲ့ Galaxy A 2020 seriesသစ်တွေဖြစ်တဲ့ Galaxy A11, A31 နဲ့ A41 ဖုန်းတွေကို ထုတ်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေသိရှိရပါတယ်။ Galaxy A 2020 series အသစ်တွေမှာတော့ Samsung flagships ဖုန်းဖြစ်တဲ့ Galaxy Note 10 series ဖုန်းတွေမှာပါဝင် တဲ့ အချက်အလက်အနည်းငယ် ထည့်သွင်းပေးထားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ Galaxy A51 နဲ့ A71ဖုန်းတွေရဲ့ နောက်ကျော ဘက်မှာ L-shaped camera module နဲ့အတူ ဆင်ဆာ4ခုပါဝင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်တရုတ်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်တဲ့ Vivo ကတော့ upper-midrange series လို့ဆိုရမယ့် Vivo X30 ဖုန်းတွေကို လာမယ့် 16 ရက်နေ့ တရုတ်မှာ မိတ်ဆက်မယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ Vivo X30 seriesတွေမှာတော့ Vivo X30 နဲ့ X30 Pro ဆိုပြီး မော်ဒယ်2မျိုးပါဝင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖုန်းတွေမှာ SA နဲ့ NSA 5G modes တွေကို ထောက်ပံ့ မှာပါ။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ကတော့ Samsung Exynos 980 chipset ကို သုံးလာမယ်ဆိုတာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Samsung Exynos 980 chipset ဟာ 5G modem ပါဝင်နေတာကြောင့်ပါ။ အဲ့ဒီစမတ်ဖုန်း တွေမှာလည်း quad camera setup နဲ့ဖြစ်ပြီး ကင်မရာတွေဟာဖုန်းရဲ့ထောင့်ဘက်မှာ ဒေါင်လိုက်ပုံစံမျိုးတပ်ဆင်ထားမှာပါ။ 60x super zoom နဲ့အတူ periscope lens တွေပါတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ထောင့်ဘက်မှာ punch-hole display ဖြစ်ပါ တယ်။ 33W fast charging ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ Vivo X30 features ပိုင်းအနေနဲ့ 6.44-inch display ဖြစ်ပြီး JoviOS ကို pre-loaded ထည့်သွင်းထားမှာပါ။
Vivo X30 series စမတ်ဖုန်းတွေကို မိတ်ဆက်ပြီးနောက်ရက်မှာပဲ Realme အနေနဲ့သူတို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းသစ်တွေဖြစ်တဲ့ Realme XT mid-ranger ဖုန်းကို အိန္ဒိယမှာဖြန့်ချိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Realme XT 730G လို့နာမည်ပေးထားပြီး Snapdragon 730G chipset နဲ့အတူ ပိုကောင်းတဲ့အရှေ့ဘက်ကင်မရာကို ထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ faster charging နည်းပညာလည်း သုံးနိုင်မှာပါ။ ဈေးကွက်ပုံစံကိုအနည်းငယ် နားလည်လို့မရတာကအဲ့ဒီဖုန်းကို ကမ္ဘာ့စမတ်ဖုန်း ဈေးကွက်မှာ Realme X2 လို လူသိများပါတယ်။ Realme XT 730G နဲ့အတူ wireless earbuds ကိုပါ အိန္ဒိ်ဈေးကွက်အတွက် ထုတ်ပေးမှာပါ။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ထဲမှာတော့ wireless earbuds ကိုရောင်းချနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာ ပိုင်းအတွက် ဒီဖုန်းမှာ Samsung GW1sensor ဖြစ်တဲ့ 64MP ကို သုံးထားမှာဖြစ်ပြီး f/1.8 aperture နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ XT 730G ရဲ့ဘက်ထရီဟာ 4000mAh စွမ်းအားနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က Vivo အနေနဲ့ iQOO Neo 855 Racing Edition ကို တရုတ်နိုင်ငံဈေးကွက်အတွက် လာမယ့် 12 ရက်နေ့မှာ တရားဝင်ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ iQOO Neo 855 ဟာ စွမ်းအားပြည့်ပရိုဆက်ဆာနဲ့ဖြစ်ပြီး Snapdragon 855+ ကိုသုံးထားတာပါ။ ပြီးတော့အားသွင်းမြန်တဲ့ စနစ်ကလည်း 33W fast charging ဖြစ်ပါတယ်။ memory2မျိုးရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး 8GB RAM မှာ 128 GBနဲ့ 12/128 GB version ဆိုပြီးတော့ ဖြစ်ပါတယ်။ Racing Edition features ပိုင်းအနေနဲ့ 6.38-inch S-AMOLED display ကိုသုံးထားပြီး waterdrop notch ဖြစ်ပါတယ်။ Android9Pie OS အခြေပြုFunTouch OS9ကို သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Multi-Turbo acceleration နည်းပညာကြောင့် ဂိမ်းမင်းစွမ်းဆောင် ရည်ပိုင်းမှာ ပိုကောင်းတဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ရရှိပါလိမ့်မယ်။ Game Box ၊ Game Space 2.5 အသုံးနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ထရီကတော့ 4,500mAh စွမ်းအားနဲ့ဖြစ်ပြီး liquid cooling နဲ့အတူ 10-layer heat dissipation စနစ်ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်းမှာ Huawei အနေနဲ့ Nova6စီးရီးဖုန်းတွေကို မိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာအတွက် သတင်းကောင်းလို့သတ်မှတ်ရမှာပါ။ Nova 6, Nova65G နဲ့ Nova6SE တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Huawei Nova6နှင့် Nova65G နှစ်မျိုးလုံးမှာမျက်နှာပြင် 6.57 လက်မ FHD+ AMOLED ရုပ်ထွက်သုံးထားပြီး မျက်နှာပြင်ဘယ်ဖက်မှာ Punch-Hole ပါဝင်ပါတယ်။ ရှေ့ကင်မရာနှစ်လုံးက 32MP+8MP ဖြစ်ပြီး ဒုတိယကင်မရာက 105 ဒီဂရီမြင်ကွင်းကျယ် ရိုက်ကူးနိုင်ပါမယ်။ ဒါပေမယ့် Nova6နှင့် Nova65G အကြား ကွဲပြားသွားတာကတော့ Nova65G မှာ Autofocus ပါဝင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောဘက်ကင်မရာသုံးလုံးက 48MP+8MPTelep- hoto(OIS)+8MP Ultrawide ဖြစ်ပါတယ်။ Nova6မှာ အဓိကကင်မရာ 48MP မှာ Aperture f/1.8 သုံးထားကာ Nova65G မှာ Aperture f/1.7 သုံးထားပါတယ်။ Huawei Nova6နှင့် Nova65G တို့နှစ်မျိုးလုံးကို Kirin 990 Chipset နှင့်ပါဝါထောက်ပံ့ထားပါတယ်။ ဖုန်းနှစ်မျိုးစလုံးမှာ လက်ဗွေရာစနစ်ကိုဘောင်မှာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။Nova65G မှာတော့Balong 5000 5G Modem ပါဝင်ပါတယ်။ ဖုန်းနှစ်မျိုးလုံးမှာ RAM8GB ပါဝင်ပါတယ်။ Huawei Nova6ကို 128GB ဗားရှင်းတစ်မျိုးတည်းနှင့်ဘဲ ရွေးချယ်နိုင်ပေမယ့် Nova65G ကိုတော့ Storage 128GB နှင့် 256GB တို့နှင့်ရွေးချယ်နိုင်ပါမယ်။ ဖုန်းနှစ်မျိုးလုံးမှာ Android 10 အခြေခံ EMUI 10 အသုံးပြုထားပါတယ်။ Nova6မှာဘက်ထရီ 4100 mAhပါဝင်ပြီး 5G ဗားရှင်းမှာဘက်ထရီ 4200 mAhပါဝင်ပြီး40W Huawei SuperChargeဖြင့်အားသွင်းနိုင်ပါမယ်။Huawei Nova6SE ကတော့အလယ်အလတ်တန်းစမတ်ဖုန်းအမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖုန်းမှာမျက်နှာပြင် 6.4 လက်မ FHD+ LCD သုံးထားပြီး Punch-Hole မှာ ရှေ့ကင်မရာ 16MP ကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။ အခြား Nova6ဖုန်းနှစ်မျိုးလိုဘဲ လက်ဗွေရာစနစ်ကိုဘောင်မှာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ကျောဘက်ကင်မရာလေးလုံးပါဝင်ကာ 48MP+8MP Ultrawide+2MP Macro+2MP Depth တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖုန်းကို Kirin 810 Chipset ၊ RAM8GB နှင့်အထိုင်ချထားပြီး Storage 128GB ပါဝင်ပါတယ်။ ဘက်ထရီ 4000 mAhပါဝင်ပြီး 40W Huawei SuperCharge ဖြင့်ဘဲ အားသွင်းနိုင်ပါမယ်။
Samsung က သူ့ရဲ့ပြင်သစ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ Galaxy S10 Lite ရဲ့ Support Page ကို လွှင့်တင်လိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီလအတွင်း ကြေညာသွားနိုင်ပါတယ်။ SM=G770F/DS Model အတွက် Page ကို ဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်ပြီး အဲဒါဟာ Galaxy S10 Lite ဖြစ်မယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲဒီ Model ကို FCC Page မှာလည်း တွေ့ခဲ့ရပြီး 45W Fast Charging ထောက်ပံ့တဲ့ 4,500mAh Battery ပါမယ်လို့ သတင်းထွက်နေပါတယ်။ Galaxy S10 Lite မှာ 48MP Main , 12MP Ultrawide နဲ့ 5MP Depth Sensor တွေပါမယ်လို့သတင်းထွက်နေပါတယ်။ အရှေ့ကင်မရာက 32MP ဖြစ်ပါတယ်။ Samsung က မကြာခင်မှာ Galaxy S10 Lite ကိုချပြတော့မယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ သူနဲ့အတူ Galaxy Note 10 Lite ပါထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေမကြာခင်က Geekbench ကနေ ထွက်လာခဲ့ဖူးပါတယ်။ 45W Fast Charging ထည့်သွင်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားက 6.7 လက်မဖြစ်ပြီး Full HD+ Resolution ဖြစ်ပါတယ်။ Galaxy A91 မှာလို Qualcomm Snapdragon 855 Chipset မောင်းနှင်ထားမှာပါ။ 8GB RAM နဲ့ 128GB Storage တွေ ထည့်သွင်းထားနိုင်ပါတယ်။ Galaxy S10 Lite ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအများစုဟာ Galaxy S10 နဲ့တူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Previous articleNokia7VS Nokia7Plus
Next articleXbox Series X ကို Microsoft ကွညော
Best smartphones of 2019 : Find the best phone for you
iPhone SE2(aka iPhone 9) : Everything We Know So...